5 dhacdo naadir ah oo cimilada ah | Saadaasha Shabakadda
5 ifafaale cimilo naadir ah
Daruuraha cumulus ee diyaaradda laga dhex arkay.
Saadaasha hawada waa cilmi soo jiidasho leh, oo had iyo jeer kaa yaabisa. Waana inaan ku noolahay meere aad u nool, aad iyo aad u badan in mararka qaarkood ay jiraan ifafaale cimilo naadir ah, laakiin qurux kali ah.
Ma jeclaan lahayd inaad ogaato waxa qaarkood ka mid yihiin? Halkan waxaa ah liiska 5ta ugu xiisaha badan uguna yaabka badan.
1 Daruuraha Pyrocumulus
2 Onkod Cagaaran
3 Daruuraha cowska
4 Suunka Venus
5 Duufaan dab
Quruxsan, sax? Daruurtan, sidoo kale loo yaqaanno daruur dab ah, waxay u egtahay sida likaha oo kale waxayna samaysantaa marka heerkulka hawada dusha sare uu si dhakhso leh u kululaado. Markay heer kulku kacdo, dhaqdhaqaaqyada gudbinta ayaa la soo saaraa kuwaas oo ka dhigaya tirada hawadu inay kor u kacdo illaa ay ka gaarto meel xasillooni leh. Sidaa darteed, waxay sameysmaan oo keliya marka uu jiro kuleyl degdeg ah oo daran, sida qaraxyada fulkaanaha, dabka kaynta, iyo xitaa qaraxyada nukliyeerka.
Sidoo kale loo yaqaan flash flash, waa dhacdo indho indheyn ah oo dhacda qorrax dhaca kadib, ama qorrax soo bax ka hor. Waxay dhacdaa marka iftiinku u gudbo jawiga; hawada hoose waa ka cufan tahay tan lakabyada sare, marka falaadhaha qorraxda waxay raacaan waddo qalooca oo ka yar ama ka yar. Iftiinka cagaaran ama buluuga ah wuxuu qalooca in ka badan iftiinka casaanka ama liinta, marka waxaa lagu arki karaa isha qaawan.
Kuwani waa daruuraha ugu sarreeya ee ku jira jawiga, oo ku yaal mesosphere, oo ah joog u dhexeeya 75 iyo 85km. Waxaa sidoo kale loogu yeeraa daruuraha cirifka ah. Dhacdadan waxay u muuqataa oo keliya marka iftiinka qoraxda uu ka iftiimiyo iyaga oo ka hooseeya cirifka, halka lakabyada hoose "qarsoon yihiin", hooska.
Weligaa cirka ma ku aragtay jubbad casaan ah markii aad subaxdii kacdid? Lakabkaan waxaa loo yaqaan Belt of Venus, kaas oo fidiya inta udhaxeysa 10 ilaa 20 darajo oo ka saraysa cirifka. Midabka casaanka ee qaansada waxaa u sabab ah iftiinka ka ifaya jihada meesha uu ka yimid, taas oo ah qorraxda.
Astaamaha dabka ama duufaannada dabka waa dhacdo si dabiici ah uga dhacda dabka ka kaca dabka. Waxay dherer ahaan noqon karaan 10 illaa 50 mitir, iyo ballac dhawr mitir ah; inkasta oo haddii xaaladaha ku habboon la siiyo ay cabbiri karaan in ka badan 1km oo dherer ah, ayna ku jiri karaan dabaylo duufaan ka badan 160km / h. in maqaalkan mid dhalashadiisa waad arki kartaa.
Maxaad ka fikirtay dhacdooyinkan cimilada dhifka ah? Ma taqaan kuwa kale?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » 5 ifafaale cimilo naadir ah
Waa maxay kuleylka